Ry Mpiasam-mpanjakana Okrainiana, Isaoran’ny Sampam-pitsikilovana Rosiana ianareo Noho Ny Fiaraha-Miasa ! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2015 3:03 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español, Deutsch, English
Nahoana no olana izany ? Manatsotra ny fitsofohan'ny sampam-pitsikilovana sy manampahefana Rosiana amin'ny seraseran'ny manampahefana Okrainiana ny fampiasana ny mailaka Rosiana. Mahavariana ireo tandrevaka sasany ataon'ny governemanta amin'ny serasera anatiny, miaraka amin'ny adin'ny Okrainiana mba handresy amin'ny ady misokatra ataony amin'i Rosia momba ny fampitàm-baovao.
Amin'ny ankapobeny dia toa tsy manana olana ny Okrainiana amin'ny fampiasana ny aterineto Rosiana. Araka ny fikarohana nataon'ny Banky Okrainiana PrivaBank dia 64%-n'ny Okrainiana mpanjifany no mampiasa ny mailaka Rosiana, 14% mifidy ny Okrainiana ary 14% hafa ny Gmail. Tian'ny Okrainiana ihany koa ny tambajotra sosialy Rosiana, satria eo amin'ny kaonty Okrainiana 27 tapitrisa eo no ao amin'ny VKontakte ary manodidina ny 11 tapitrisa no ao amin'ny Odnoklassniki. .
Nanapa-kevitra ny hisintona ny sain'ireo Okrainiana tompon'andraikitra ny amin'ireo loza mety hateraky ny fampiasana mailaka Rosiana– sy nanao sangisangy amin'ireo mpiasa birao mba ho mailo amin'io resaka io — ny vondronà mpanao gazety avy amin'ny tranonkala Okrainiana mpanao fanadihadiana texty.org.ua. Nanao fanadihadiana ny angondrakitra misokatra an'arivon'ireo mailaky ny fanjakana sy ny governemanta Okrainiana (2-3%-n'ny mailaka rehetra fotsiny) ny texty.org.ua teo aloha teo, ary nanangana lisitry ny mailaka .ru rehetra hitany tao – 1700 eo ho eo no isany.
Efa nohamoraina ny fitsofohana ahafahan'ny sampam-pitsikilovan'ny Federasiona Rosiana miditra amin'ireo angona izay ampitain'ny ISP Rosiana sy iasàn'ireo orinasa rosiana misahana ny aterineto amin'ny rakitry ny mpisera. Tamin'ny 8 Aprily 2015, nomena fahefana tahaka izany ny Roscomnadzor, Rosiana mpanara-maso ny aterineto izay nanome fahefana ireo mpiasany mba hitsongo dia ireo hafatra an'olon-tokana any amin'ny haino aman-jery sosialy sy ireo mailak'ireo Rosiana mpisera. Ao anatin'izany ny sampan-draharaha miandraikitra ny faritra mailaka .ru, ny Odnoklassniki, ny Vkontakte (samy tranonkalan-tambajotra sosialy Rosiana malaza ireo roa ireo), ny fandefasana hafatra eo noho eo toy ny ICQ sy ny Agent.Mail.Ru ary ireo vovonanà bilaogy rosiana maro.
Ny vahaolana, izay ampahany amin'ny fehezan-dalàna amin'ny “ady atao amin'ny fampihorohoroana” nosoniavin'ny Piraiminisitra Dmitry Medvedev dia manome ho an'ny Roscomnadzor ireny tombony amin'ny “fidirana nohamoraina amin'ny torohay” ireny ho toy ny dingana mankany amin'ny “fiarovana ny zon'ny olom-pirenena Rosiana”. Manome alàlana ny Roskomnador hitsongo dia ireo hafatra voaray sy nalefa ary ny hafatra lasa ilay fanovàna, ary hatramin'ny fanaovana fanadihadiana ny mombamomba. Ny tombontsoa hafa dia ny fahazoana mitsofoka amin'ny votoatin'ny zavatra manokana ataon'ilay mpisera ety amin'ny aterineto- izany hoe : ireo antotan-drakitra izay tsy tokony hisy hahita afa-tsy ny tompony ihany. Mandritra izany fotoana izany , nohamafisin'ny Roskomnadzor fa ny lalàna ihany no mamela an-dry zareo hitsofoka amin'ny angon-drakitra ambadika (metadata), saingy tsy manome alàlana azy ireo hamaky ny votoatin'ny mailaka sy ny hafatra amin'ny aterineto. Mba hanatontosàna izany dia tokony mila ny taratasy fangatahana ôfisialy avy amin'ireo fahefana mpampihatra lalàna miandraikitra ny fanadihadiana ry zareo.